‘प्वाक्क मुखाँ’ हान्नु जस्तो !
यो चर्चित थेगो सुन्नेवित्तिकै जो कसैले हास्य कलाकार शिवहरि पौड्याललाई सम्झिन्छन् ।
२ दशकअघिका टेलिभिजनका दर्शकले उनलाई अझ मज्जाले सम्झिन्छन्, जसले त्यसबेलाको चर्चित टेलिसिरियल ‘देवी’ हेरेका छन् ।
‘देवी’मा नायिका देवीका अभिन्न मित्रका रूपमा चित्रित पात्र ‘पूर्णे’ शिवहरि नै हुन्, जसले गर्दा अहिले पनि उनलाई देख्ने, भेट्ने कतिपयले त्यही पात्र ‘पूर्णे’ भनेर चिन्छन् ।
शिवहरि स्थापित कलाकार हुन् । हास्य विधामा उनको नाम उत्कृष्ट १० भित्रै पर्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
हास्य कलाकारका रूपमा लामो र स्थापित परिचय बनाएका शिवहरिको अन्य पाटोबारे कमैलाई जानकारी छ ।
उनको फरक पाटो अझ घतलाग्दो छ ।
उनी पूर्वबैंकर एवं पूर्वपत्रकार पनि हुन् । उनले ३ दशक नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिताएका छन् भने ४ वर्ष पत्रकारिता गरेका छन् ।
१७ पुस २०४१ मा खरिदार भएर राष्ट्र बैंकमा छिरेका पौड्याल डेपुटी डाइरेक्टर पदसम्म पुगेर १७ पुस २०७१ मा अवकास भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा रहँदाका उनका अनुभव सुन्नलायक छन् । जीवनमा शिवहरिले गरेको सङ्घर्ष, लगन र मिहिनेत धेरैका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ । अरूलाई अक्सर हँसाइरहने शिवहरिले जीवनमा झेल्नुपरेका अभाव र दबाबको फेहरिस्त लामो छ ।
२०२३ सालमा मकवानपुरमा जन्मिएका शिवहरिका दाजुभाइ, दिदीबहिनी १० जना हुन् । उनी कान्छो छोरा हुन् ।
शिवहरिले सानैदेखि अभावको जीवन झेल्नुपर्‍यो । उनका बुबा सामान्य कृषक थिए, जो आफ्नो कान्छो छोरालाई चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भएको हेर्न चाहन्थे ।
तर, सोचेका कुरा सबै कहाँ पूरा हुन्छन् र ! ठूलो परिवार, त्यसमाथि न्यून आय भएकाले शिवहरिलाई उनका बुबाले ७ कक्षासम्म मात्र पढाउन सके । त्यसपछि एसएलसीसम्म उनका साहिँला दाजु विजय पौड्यालले पढाए ।
शिवहरि पढ्नमा भने अब्बल थिए । पाठ्यपुस्तकसँगै उनले दुःखबाट पनि आवश्यक पाठ सँगालिरहेका थिए ।
आयल निगमममा ज्यालादारी
२०३८ सालतिरको कुरा हो । टेस्ट दिएपछि उनले १५ वर्षकै उमेरमा अमलेखगञ्जस्थित आयल निगममा स्टोर किपर (मुखिया सरह)को काम सुरु गरे । त्यसबेला उनले दैनिक ज्याला पाउँथे ।
‘दिनको १० रुपैयाँ पाउथेँ तर मैले गरिबी चिनेकाले त्यो मेरालागि ठूलै रकम थियो’, शिवहरि सम्झिन्छन्, ‘त्यही १० रुपैयाँ बैंकमा राख्नका लागि मैले नेपाल बैंकमा पहिलो पटक खाता खालेको हुँ ।’
३–४ महिना ज्यालादारीमा काम गरेपछि उनले आयल निगममा अस्थायी नियुक्ति पाए । अब उनले मासिक ३ सय ३० रुपैयाँ तलब पाउन थाले । जागिर सुरु गरेको ७–८ महिनापछि उनले खरिदारमा नाम निकाले । त्यसपछि उनको मासिक तलब ५ सय २५ रुपैयाँ ७५ पैसा भयो !
शिवहरिलाई लाग्थ्यो– सकेसम्म जीवनमा कठिन सङ्घर्ष गर्छु, कुनै लक्ष्यमा पुगेरै छाड्छु ।
तर, मोफसलमा बसेर यस्तो सपना पूरा नहुने निष्कर्षमा उनी पुगे र राजधानी काठमाडौं छिर्ने सोच बनाए ।
एक पटक काठमाडौंबाट आयल निगमका हाकिम उद्धवप्रसाद पोखरेल अमलेखगञ्ज गएको मौकामा शिवहरिले अनुनय गरे, ‘मलाई काठमाडौं सरुवा गरिदिनुपर्‍यो । म थप पढ्न चाहन्छु । केही गर्न चाहन्छु ।’
‘काठमाडौं गयौ भने तिमीले झन् ठूलो दुःख पाउँछौ, बाहिरबाट हेर्दा मात्र त्यो शहर सुन्दर छ । त्यहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको जीवनकथा साह्रै कष्टपूर्ण हुन्छ’, पोखरेलले यस्तो जवाफ दिए ।
उनी आत्तिएनन्, पछि हटेनन्, कारण– उनले जीवनमा सङ्घर्षको अठोट गरिसकेका थिए ।
‘बरु म भोकै पढ्छु । एक छाक मात्र खान्छु । सबैभन्दा सस्तो क्याम्पस पढ्छु । वर्षमा एक जोर मात्र लुगा फेर्छु । जसरी पनि मलाई काठमाडौं सरुवा गरिदिनुपर्‍यो’, आफूले हाकिमसँग रोइकराइ गरेको शिवहरि सम्झिन्छन् ।
शिवहरिको उत्कट इच्छा र आत्मविश्वास देखेर पोखरेलले उनलाई स्थायी गराएर १ असोज २०४० मा काठमाडौं सरुवा गराइदिए । त्यसपछि शिवहरिका अझ कठिन सङ्घर्षका दिन सुरु भए ।
आयल निगममा काम गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकमा खरिदार पदमा जागिर खुल्यो । ‘बुबाले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । म हुन सकिनँ । आयल निगमभन्दा बैंक नै मेरो बुबाको चाहनासँग जोडिएको जागिर लागेर मैले राष्ट्र बैंकको परीक्षा दिएँ र १७ पुस २०४१ मा राष्ट्र बैंकको खरिदार भएँ’, शिवहरि भन्छन् ।
बैंकको जागिर र कलाकारिता
उनीभित्र कलाकार पनि लुकेको थियो । सानातिना विषयमा ख्यालठट्टा गरी अक्सर सहकर्मीलाई उनी हँसाउने गर्थे । सहकर्मी पनि उनीसँग कुरा गरिरहन रुचाउँथे ।
राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेको केही वर्षपछि उनले कार्यालय समय सुरु हुनुअघि र पछिको समय कलाकारिता क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न थाले । निकै मिहिनेती र इमान्दार थिए उनी ।
‘आफ्नो कलाकारिताका कारण मैले कहिल्यै कार्यालय समयलाई बाधा पुर्‍याइनँ’, उनी भन्छन्, ‘कसैले कतै मौका दिइहाल्छ कि भनेर बिहान ९ बजेअघि र साँझ ५ बजेपछि फिल्डमा निस्कन्थेँ । मौका पाइहालेँ भने मेरो शर्त हुन्थ्यो– पैसा जति नै कम दिनुस्, म नाइँ भन्दिनँ तर कार्यालय समयमा चाहिँ म सुटिङमा आउन सक्दिनँ ।’
राष्ट्र बैंकमा काम गर्न सुरु गरेपछि उनी बिहान ४ बजे उठेर खाना बनाउँथे र कलेज जान्थे । कलेजबाट फर्किएपछि तरकारी बनाउँथे र हतारहतार खाएर कार्यालय जान्थे ।
आफूले सार्वजनिक बिदासमेत बचत गरी कलाकारितामा सदुपयोग गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘कलाकारिता क्षेत्रमा केही गर्ने मनोबल बनिसकेकाले राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा कहिल्यै बिदा बसिनँ बरु बिदाको दिन बैंकमा गएर काम गर्थें’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबापत मलाई बिहान राष्ट्र बैंकबाट कहिलेकाहीँ स्टेज कार्यक्रमहरूमा जानका लागि छुट हुन्थ्यो ।’
राष्ट्र बैंकमा रहुन्जेल उनलाई कहिल्यै पनि कलाकारिताबाट काममा असर पर्‍यो भनेर कसैले टीकाटिप्पणी गरेनन् । बेलुकाको समय छुट्याएर अभ्यास गर्नतिर लाग्थे उनी ।
उनलाई सुनिल पोखरेलले ‘आरोहण शनिबार’मार्फत पहिलो पटक रङ्गममञ्चमा ल्याए । शिवहरिलाई टेलिफिल्म खेलाउनेचाहिँ लय सङ्ग्रौला हुन् । उनले त्यतिबेलाको चर्चित टेलिफिल्म ‘देवी’मा भूमिका पाए ।
‘टु–नाइन ट्वान्टी–नाइन हुन्छ भने वान–नाइन वान्टी–नाइन किन हुँदैन ?’, ‘बन्द गरेको चिनीको बट्टाभित्र कमिला कसरी छिर्‍यो ?’ भनेर सोध्दै हिँड्ने पात्रका रूपमा शिवहरि अत्यन्तै रुचाइए ।
शिवहरि भन्छन्, ‘मलाई मौका दिने सुनिल पोखरेल र लय सङ्ग्रौलालाई म मेरा गुरु मान्छु, उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्छु ।’
रोचक पक्ष के छ भने शिवहरिले जीवनमा जेजे महत्त्वपूर्ण काम गरे, राष्ट्र बैंक रहँदा नै गरे । राष्ट्र बैंकमा जागिर छँदै शिवहरि देशव्यापी रूपमा चिनिइसकेका थिए ।
कलाकार बनौँला भन्ने थिएन
सानोमा उनलाई कहिल्यै लाग्दैन थियो रे, ‘आफू कलाकार बनौँला’ भनेर ।
‘मभित्रको प्रतिभा नै मलाई थाहा थिएन । कहिलेकाहीँ स्कुल र कलेजका कार्यक्रमहरूमा क्यारिकेचर (बोलीको नक्कल) गर्थं तर मलाई हास्य कलाकार नै बन्छु जस्तो लाग्दैनथ्यो’, उनी सम्झिन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएको ६ वर्षपछि आँखा अस्पतालमा काम गर्ने एक जना साथीले तिमी हास्य विधामा लाग भनेर मलाई सुझाव दिए । उनले त्यसो भनेपछि मलाई कलाकारितामा लाग्ने जोस बढ्यो ।’
त्यसबेलाको बैंकिङ प्रणाली
अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र निकै सबल बनिसकेको छ, वित्तीय पहुँच बढेको छ । शिवहरिका अनुसार त्यसबेला एकदमै न्यून जनसंख्या मात्र बैंकको पहुँचमा थियो । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थिए । नबिल बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक भर्खरै स्थापना भएका थिए । अरू बैंक खुल्ने क्रममै थिए ।
तर, धेरै मानिसलाई बैंक के हो भन्ने नै थाहा थिएन । ‘राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेपछि मैले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अझ नजिकबाट नियाल्ने र अनुभव गर्ने मौका पाएँ । त्यसबेला बैंकका कामहरू ज्याँदै झन्झटिला थिए’, उनी भन्छन् ।
त्यसबेला बैंकमा राखेको पैसा निकाल्न कम्तीमा ५ घण्टा समय लाग्थ्यो रे ! त्यो पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न निकै अप्ठ्यारो हुने । ‘लामो समय कुरेपछि मात्र नामको अघिल्लो अक्षरका (अल्फाबेट)का आधारमा खातामा भएको रुपैयाँ निकाल्न सकिन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘मैले राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गर्दा बैंकमा एउटा पनि कम्प्युटर थिएन । सबै काम ढड्डाबाटै हुन्थ्यो ।’
एउटा कम्युटरले खाइदियो जागिर
२०५७ सालतिरको कुरा हो । राष्ट्र बैंकमा एउटा मात्र कम्प्युटर थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकमा ३०–४० जना कर्मचारी थिए ।
‘कम्प्युटर थपिएपछि ५–६ जनाको जागिर नै गयो’, उनी भन्छन्, ‘कम्प्युटरको प्रयोगले काम गर्न पनि सहज बनायो । सुरुमा चेकका रेकर्ड मात्र कम्प्युटरमा राख्ने गरिन्थ्यो । त्यसपछि बैंकमा सर्भर राख्ने चलन आयो । ढड्डामा रहेका रेकर्डहरू कम्प्युटरमा रहन थाले भने हस्ताक्षर, डेबिट र क्रेडिटका काम पनि कम्प्युटरबाटै गर्न थालियो ।’
तोरीको भाँडामा पैसा
‘मैले राष्ट्र बैंकमा काम गरेको लामो समयसम्म नेपालको वित्तीय चेतना र पहुँच अत्यन्तै न्यून थियो । अहिले नेपालका ६१ प्रतिशत नागरिक वित्तीय पहुँचमा पुगिसकेका राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ’, शिवहरि थप्छन्, ‘तर, त्यसबेलाको अवस्था अर्कै थियो ।’
उनका अनुसार धेरै नेपालीलाई बैंक के हो भन्ने नै थाहा थिएन । उनको परिवारमा पहिलो पटक बैंक खाता खोल्ने व्यक्ति नै शिवहरि रहेछन् । बैंक के हो भन्ने कुरा उनका बुवाआमाले जान्दैन थिए । थाहा भएकाहरूले पनि बैंकलाई खासै विश्वास गर्दैन थिए । त्यसैले आफ्ना बुबाले आफूसँग भएको पैसा सन्दुस र बाकसमा राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
शिवहरिलाई अझै सम्झना छ, आफ्ना बुबाले सबैभन्दा ठूलो रकम २६ सय रूपैयाँ कपडामा पोको पारेर तोरीको भाँडामा पुरेर राखेका थिए ।
फेरि बैंकमा कारोबार गर्न मन लागे पनि त्यो सहज थिएन । गाउँबाट वीरगञ्ज र हेटौँडा पुग्नुपथ्र्यो । आफ्नै पैसा बैंकलाई दिन कसले त्यत्रो दुःख गर्ने ! यस्तै सोच्थे रे त्यसबेलाका धेरै मानिस ।
‘त्यसबेला धेरै पैसा भएका मान्छे मात्र बैंकमा जान्छन् भन्ने ठानिन्थ्यो । बैंकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई ठूलो मान्छे भनिन्थ्यो । पैसा नभएका मानिसहरू बैंकमा जानै डराउँथे’, शिवहरि भन्छन् ।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, अहिलेका हास्य कलाकार शिवहरि पौड्याल कुनै बेलाका पत्रकार पनि हुन् । उनले २०४४ सालदेखि ३–४ वर्ष पत्रकारिता गरेका थिए । नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटबाट १० महिने पत्रकारिता तालिम लिएर उनले वसन्त चौधरीको ‘उर्वशी’ नामको मासिक पत्रिकामा काम गरे । ‘यो पत्रिकामा इला शर्माजी र मैले काम गरेका थियौँ’, उनले भने ।
इला शर्मा पछि निर्वाचन आयुक्त भएकी थिइन् ।
राष्ट्र बैंकमा जागिर खाइरहँदा शिवहरिले विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई परीक्षण गरे । कहिलेकाहीँ उनलाई लाग्थ्यो रे, ‘जुन क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल पाउँछु, त्यसैमा निखारिन्छु, त्यसैमा रमाउँछु, केही गरेर देखाउँछु ।’ त्यसैले त बैंकिङ क्षेत्रसहित कलाकारिता, पत्रकारितादेखि गायनसम्मका विधामा उनी छिरे ।
उर्वशीमा काम गरेपछि इन्टर्नसिपका लागि उनी साप्ताहिक विमर्शमा गए । यो अखबार पञ्चायतको विरुद्ध वकालत गर्ने अर्थात् तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र जस्तै थियो । राजनीतिक समाचार र विचारलाई प्राथमिकता दिने पत्रिका थियो । राजाको शासनका विरुद्ध वा निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध ‘मिसन पत्रकारिता’ गरिरहेको थियो विमर्शले ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधिहाल्यो, ‘राजनीतिक पत्रिकामा किन काम गरेको ?’
‘मैले इमान्दारीपूर्वक जवाफ दिएँ– हो म साप्ताहिक विमर्शमा इन्टर्नसिप गरिरहेको छु । यो मेरो आंशिक जागिर हो । यसरी गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा पनि थिएन’, उनले भने ।
उनले निवेदन चढाएपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले उनलाई साहित्यिक, मनोरञ्जनात्मक पत्रपत्रिकामा मात्र काम गर्ने अनुमति दियो । पछि उनले रमण घिमिरेसँग रूपरङ्ग मासिक पत्रिकामा डेढ वर्ष काम गरे । यो पत्रिका चलचित्रसँग सम्बन्धित थियो ।
यति मात्र कहाँ हो र ! शिवहरि पौड्याल गायक पनि हुन् । २०४३ सालमा उनले रेडियो नेपालमा ४–५ वटा गीत गाए । उनले ‘ग’ श्रेणीको प्रमाणपत्र पनि पाएका छन् ।
आजको राष्ट्र बैंक
उनलाई अहिले पनि राष्ट्र बैंकमै काम गरिरहेको छु किझैँ लाग्छ रे ! ३० वसन्त राष्ट्र बैंकमै बिताएकाले हुन सक्छ, उक्त संस्थाप्रतिको माया उस्तै ताजा रहेको उनको भनाइ छ ।
उनलाई लाग्छ, आज राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र निकै फराकिलो भइसकेको छ । ‘मैले काम सुरु गर्दा बैंकिङ क्षेत्र निकै साँघुरो थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै न्यून थिए । राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न सजिलो थियो’, शिवहरि भन्छन्, ‘अहिले बैंकहरू च्याउसरि उम्रेका छन् । वित्तीय पहुँच विस्तारमा यसरी खोलिएका बैंकहरूले सहयोग पनि पुर्‍याएका छन् । तर, नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ ।’
अर्कातिर राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता पनि गुम्दै गएको हो कि भन्ने महसुस शिवहरिलाई हुन्छ रे ! भन्छन्, ‘विगतमा राष्ट्र बैंक जति शक्तिशाली थियो, त्यो शक्तिमा विस्तारै ह्रास आइरहेको देख्छु । राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । एउटा स्वायत्त निकायलाई कतिपय मन्त्रीले सिधै निर्देशन दिने, आफूअनुकूल काम गर्न दबाब दिनेजस्ता काम हुनु दुःखद् पक्ष हो ।’
जीवन र सङ्घर्ष
शिवहरिको ३९ वर्षको उमेरसम्मको जीवन कठिनाइ र सङ्घर्षमै बित्यो । यो उमेरसम्म मेरो जीवन अभाव र दबाबमै बित्यो । ‘अरूलाई हसाउने मभित्र दुःख, सङ्घर्ष र हण्डर मडारिइरहेका हुन्थे’, उनी भन्छन् ।
अहिले ५४ वर्षका भए उनी । १५ वर्ष त भयो उनले शान्तिको सास फेर्न थालेको, जीवन अलिक सहज ढंगले चलाउन थालेको ।
निकै दुरुह परिस्थिति पन्छाउँदै अघि बढेकाले जीवन र सङ्घर्षबारे शिवहरि जानकार छन् । ‘हामी जीवनदेखि निराश छौँ भने सङ्घर्षको कुरा गरिरहन्छौँ । तर, जीवनमा सङ्घर्षसँगै सफलता पनि जोडिएको छ । दुःखसँगै सुख पनि जोडिएको हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
शिवहरिका अनुसार हरेक कुरालाई यति ठूलो पनि बनाउनुहुँदैन कि कठिन लाग्न थालोस् । ‘अहिलेको पुस्तालाई नै हेरौँ, उनीहरूमध्ये अधिकांश हरेक कुरामा सङ्घर्ष मात्र देख्छन्, उनीहरू केही गर्न तयार हुँदैनन्’, शिवहरि भन्छन्, ‘जीवन तीता–मीठा, साना–ठूला पल मिलेर बनेको हुन्छ । त्यसैले यसलाई सङ्घर्षका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन । परिवर्तनका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । हुन सक्छ, आज अँध्यारो छ तर यो अँध्यारोले नै हामीलाई चम्किलो बिहानीको आनन्द लिने पलसम्म पुर्‍याउँछ ।’
उनले आफूलाई धेरै विधामा जाँचे । हरेक दिन १० देखि ५ को समय राष्ट्र बैंकलाई दिए पनि त्योभन्दा अघि र पछिको समय सदुपयोग गरे ।
उनले आफूलाई २ क्षेत्रमा सफल ठान्छन् । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षको अवधिमा उनी कहिल्यै विवादित बनेनन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको सेवा अवधि उनका लागि सफल रह्यो । कलाकारिताले त उनलाई धेरेसामु चिनाएकै छ । ‘जीवनसँग सास र साससँग जीवन जोडिएको हुन्छ । त्यसैले जबसम्म जीवन रहन्छ, तबसम्म सुखदुःखको छाया हामीमा परि नै रहन्छ, यसका लागि सधैँ तयार रहनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
कतिपय टेलिसिरियलमा च्याँठिएको बोली भएको पात्रका रूपमा देखिने शिवहरि वास्तविक जीवनमा भने निकै सौम्य, मिजासिला छन् । जो कसैसँग हाँसेर बोल्ने उनको बानी छ । उनी हत्तपत्त रिसाउँदैनन् । जो कसैलाई झट्टै विश्वास गर्ने खालको छ उनको स्वभाव ।
कुनै बेलाका बैंकर, पत्रकार शिवहरि हालै मात्र निर्देशक बनेका छन् । ‘लक्काजवान’ चलचित्रमार्फत शिवहरिले निर्देशनमा डेब्यु गरेका हुन् ।
यो चलचित्र उनले आफैँ लेखेका पनि हुन् । अहिलेसम्मको प्रगतिलाई उनी आफ्नो जीवनको फरक पाटो अर्थात् राष्ट्र बैंकको जागिरसँग लगेर जोड्न रुचाउँछन् । ‘म अहिले जे छु, जहाँ छु, त्यसको श्रेय त्यो जागिरलाई जान्छ । धेरैले मलाई राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारीका रूपमा चिन्दैनन् तर मलाई अरू सामु चिनाउने काम भने राष्ट्र बैंकको जागिरले नै गरेको हो’, उनी भन्छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३१, २०७७, १२:३४:००